बीमा शिक्षाकाे खाँचाे « News of Nepal
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रभु इन्स्योरेन्स
बीमा किन र के का लागि गर्ने ?
–आर्थिक दायित्वबाट मुक्त हुन बीमा गर्ने हो । भविष्य सुरक्षित गर्नकै लागि बीमा गर्ने हो । अहिले पनि आम मानिसहरु बीमा गर्न हिच्किचाउने गरेका छन् । जनचेतनाको अभावको कारण बीमा गर्नेहरुको संख्या ज्यादै कम रहेको छ । तीन बर्ष अघि भुकम्पको कारण ठूलो क्षति भयो ।
तर पनि अझै पनि मानिसलाई बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेतनामा बृद्धि हुन सकेको देखिदैन । बीमा गर्ने बारेमा एउटा कम्पनीले मात्र भनेर पुग्ने अवस्था छैन । सबैले सामुहिक रुपमा अगाडि बढ्नु पर्ने अहिलेको आवश्यकता छ । सबै भन्दा ठूलो कुरा प्राथमिक तहकै पाठ्यक्रममा नै बीमा सम्बन्धी शिक्षा समावेश गराउनु पर्छ । यस्तो व्यवस्था भयो भने सानैदेखि बीमा गराउनु पर्छ भन्ने चेतानाको बृद्धि हुन्छ ।
बीमाको महत्व भएर किन नागरिकहरु किन ध्यान दिन सकिरहेका छैनन् ?
हाम्रो देश गरिबीको रेखामुनि छ । कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि सम्पत्ति निकै दुःख गरेर आर्जन गरेको हुन्छ । एउटा घर बनाउनको लागि जीवनभरको कमाई खर्च गर्छ । क्षति भयो भने तुरुन्तै निर्माण गर्न सक्दैन । चिन्ता र दायित्वबाट मुक्त बीमाले मात्र गराउन सक्छ ।
नेपालमा बीमा महंगो पनि छैन् । हामी मोबाइल हरायो भने महंगो मुल्यमा महंगो मोबाइल किन्छौँ । तर हामी पाँच हजार तिरेर बीमा गर्दैनौँ । शिक्षा र जनचेताको अभाव नै मुख्य कारण हो । बीमा भनेको के हो बीमाले भविष्यमा हुने आर्थिक नोक्सानीलाई जोगाउछ भन्ने कुरा बुझनु प¥यो । उदाहरणको लागि तीन लाखको मोटरसाइकल किन्दा बीमा गरिएन भने यदि हराएको अवस्थामा पुनः नयाँ मोटरसाइकल किन्दा ६ लाख रुपैयाँ पर्छ । यस कारण पनि बीमा आवश्यक छ । यसरी बुझनु पर्छ ।
बीमा कम्पनीहरु पारदर्शी हुँदैनन् भन्छन नि ?
–पारदर्शीता नहुने भन्ने त प्रश्न नै उठदैन । किनभने यो लुकाएर गर्ने काम होइन । बीमा गरेपछि दाबी पर्छ र हामीले भुक्तानी गर्छौ । दाबी गरेपछि त्यसको अध्ययन अनुसन्धान स्वतन्त्र निकायले गर्छ । सोही अनुसार भुक्तानी दिने गरेका छौ । यहाँ अपारदर्शिता हुन्छ भनेर भन्न नै मिल्दैन ।
बीमा गर्न सजिलो भुक्तानी पाउन अप्ठ्यारो भयो भन्ने गुनासो छ नि ?
–यो गलत कुरा हो । मानिसले बीमा भविष्यमा हुने क्षतिको सोध भर्ना पाउनको लागि गर्ने हो । त्यसको लागि एउटा प्रक्रिया हुन्छ । आवश्यक प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा सात दिनभित्र नै दाबी भुक्तानी हुन्छ । सेवाग्राहीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । क्षति भएको हो कि होइन ?भनेर जाँचबुझ गर्नुप¥यो । आवश्यक काजपत्र चाहियो । सबै प्रक्रिया पुरा गर्यो भने सर्वे रिपोर्ट पनि छिटो नै हुन्छ ।
समग्र बीमाको अवस्था कस्तो छ ?
–हाम्रो देशमा दस÷एघार प्रतिशत भन्दा बढीले बीमा नै गर्दैनन् । सबैले बीमा गर्ने हो भने यसको प्रतिशत बढ्छ । बिमा कम्पनीहरुले पनि बीमा गराउनु पर्छ भनेर नागरिकहरुलाई बुझाउने काम गरेको छ । सरकारले पनि बीमा गराउनु पर्छ भनेर प्रोत्साहन गरेको छ । बीमा समितिबाट हुने काम पनि सहज रुपमा हुँदै आएको छ । बीमाको अवस्थामा सुधार गर्न एक जना लागेर मात्र हुँदैन । सबै पक्ष मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
त्यसो भए बीमा गर्न मानिसहरु किन जाँगर गर्दैन त ?
–विदेशमा कुनै पनि काम गर्दा बीमा नगरी केही काम नै गर्दैनन् । विदेशबाट एरपोर्टसम्म बिमा हुन्छ । त्यसपछि हुँदैन । हामी विदेश जाँदा एरपोर्टबाटै बीमाको खोजी हुन्छ । व्यवसाय गर्नेहरुले बैंकको कारणले पनि बीमा गर्छन् । करोडौ रुपैयाँ खर्च गर्न तयार हुने तर वीस हजार रुपैयाँ बीमा नगर्ने ? सरकारले पनि अब बीमालाई अनिवार्य रुपमा लागू गराउनु पर्छ । सरकारले चाहेको अवस्थामा कार्यान्वयन गराउन सक्छ ।
अहिलेसम्म कुन क्षेत्रमा बीमा बढी हुने गरेको छ ?
–बीमा गर्नेहरुको सङख्या गाडीमा बढी छ । निर्माण,व्यवसाय गर्ने लगायतको क्षेत्रमा बीमा छ । पहिला कुरा मैले लगानी गरेपछि कसरी सुरक्षित हुने भनेर सोच्यो भने बीमा गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता बन्छ । हरेक काम गर्नु अघि बीमा गर्ने बानीको विकास गरौँ । हजार तिरेर आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित आर्थिक दायित्वबाट बीमाले मात्र मुक्त गराउन सक्छ । बीमा गराउनको लागि अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ ।
बीमाको यति धेरै महत्व भएर पनि किन बीमा शिक्षाको कार्यक्रम किन अगाडि नबढेको त ?
–सबै ठाउँमा सबैको पहुँच हुँदैन । सबैलाई बीमाको बारेमा पढाउन पनि सम्भव छैन् । एउटा पपुर्लर मान्छेको नाम पनि सबैलाई थाहा हुँदैन । बीमाको बारेमा थाहा पाउनको लागि बीमा शिक्षा जरुरी छ । व्यक्ति विशेषको लागि होइन ।
समाजको लागि नै हो । त्यो कुरा हामीले बुझन सकेका छैनौ । बुझाउने माध्यम पनि छैन् । यसरी बीमा शिक्षाको बारेमा विस्तार हुन सक्दैन । अहिलेबीमा सम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । अब बीमा क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति बीमा इन्स्च्युटबाट पूर्ति हुन्छ । बीमामा नयाँ नयाँ कम्पनी आएका छन् ।
बीमा गर्नेको अवस्था कस्तो छ ?
–संख्यामा उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ । तर प्रतिशतमा हुनुपर्ने वृद्धि हुन सकेको छैन् । अब प्रतिशतमा बृद्धि गर्नुपर्छ । प्रतिशतलाई उल्लेखनीय रुपमा बृद्धि गर्न सक्यौ भने सफलता मान्नु पर्छ ।
बीमालाई प्रभावकारी बनाउन नीति निर्माण तहबाटै गर्नुपर्ने सुधार के–के हुन् ?
समयसापेक्ष रुपमा सुधार हुँदै गएको छ । बीमा बढ्न नसक्नुको एउटै मात्र कारण भनेको चेतनाकै अभाव हो । बीमा गर्नेको संख्या बढ्दै गएपछि त्यसबाट सबैतिर प्रभाव पर्दै जाने हो ।
बीमा कम्पनी बीमा गराउनकै लागि बसेको हो । चेतना फैलाउन जाने क्रममा बीमा कम्पनीले मात्र नसक्ने अवस्था छ । आफ्नो कम्पनीको लागि मात्र आयो भन्ने जनमानसमा पर्छ । अब बीमा कम्पनीहरु पनि सामुहिक रुपमा जानुपर्छ ।
बीमाको बारेमा चेतना फैलाउन सामुहिक रुपमा जाँदा राम्रो हुन्छ । समाजमा नकरात्मक कुरा चाँडो प्रचार हुन्छ । हो, नकरात्मक पक्षलाई न्युनीकरण र दण्डित गर्नुपर्छ । तर सकारात्मक पक्षको प्रचार गर्नुपर्छ । गलतलाई गलत भनौ । तर सकारात्मक पक्षलाई विर्सनु हुँदैन । बीमाको बारेमा नागरिकहरुमा चेतनास्तर बृद्धि गर्नुपर्ने काम बीमा कम्पनीहरुको पनि हो ।
बीमा गर्न किन प्रभु इन्स्योरेन्सलाई नै रोक्ने ?
–प्रभु इन्स्योरेन्समा नै किन गर्ने त ? सबैले हेर्ने त गुणस्तर न हो । हाम्रो सेवा गुणस्तरीय र उच्चस्तरीय छ । सर्वसुलभ पहुँचमा छ । हामीले मोबाईल एप्सबाट बीमाको बारेमा जानकारी लिन सकिने व्यवस्था गरेका छौं । बीमाको बारेमा जानकारी लिनु प¥यो भने कसैले पनि कम्पनीमा फोन गरेर व्यक्तिलाई भेटेर सोध्नु पर्ने अवस्था छैन् ।
मेरो सम्पत्तीको बीमा गर्दा कति पैसा लाग्छ भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो मोबाइल एप्सबाटै पाउन सकिन्छ । मोबाइल एप्समा प्रभु इन्स्युरेन्स डाउनलोड गर्नुहोस,त्यसबाट सम्पूर्ण जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ । हामीले अनलाइनबाटै पोलिसी जारी गछौं । प्रविधिको पहुँच भएको ठाउँमा तुरुन्त गर्न सक्नुहुन्छ । तुरुन्तै कुनै ठाउँमा बसेर बीमा गर्नसक्नु हुन्छ ।
प्रभु इन्स्युरेन्सले दिन खोजेको नयाँ सेवा भनेको कसैको गाडी कारण वंश नौवेसीमा गएर विग्रियो । भनेको ठाउँमा बनाउने ठाउँ पनि हुँदैन । कहिलेकाही पाँच सयको लागि पाँच हजार तिर्छु भन्दा पनि सुविधा पाइदैन । हाम्रो कम्पनीमा इन्सुयोरेन्स गर्ने गाडीहरुलाई बाटोमा कोही पनि अलपत्र नपरोस भनेर हामीले फोकल पर्सन नियुक्त गरेका छौ ।
हाम्रो कम्पनीका गाडीहरु बाटोमा कारण वंश विग्रिएको अवस्थामा तुरुन्त फोन गर्न सक्नुहुनेछ । त्यो फोकल पर्सनले कुनै नजिकको सेन्टरबाट गाडी बनाइदिने व्यक्तिको व्यवस्था गरिदिन्छ । तानेर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, हामी सुविधा उपलब्ध गराइरहेका छौं । उक्त सुविधा दिए बापत कम्पनीले कुनै शुल्क लिदैन । निर्धारित गन्तव्यसम्म पु¥याइदिने व्यवस्था हुन्छ । गाडी बिग्रियो फोन गर्नुहोस । हामीले हाम्रो कम्पनीमा बीमा गर्ने गाडीहरु अलपत्र पार्ने अवस्था हुन दिदैनौ ।
प्रभु इन्स्योरेन्सको हालसम्म कति शाखा पुग्यो ?
–तेस्रो त्रैमासिकसम्म २२ बटा मात्र शाखा थियो । अहिले हाम्रो ३१ व्टा शाखा पुगिसकेको छ । तत्काल नै हामीले ४१ वटा शाखा पु¥याउने लक्ष्य राखेका छौं । छिट्टै नै थप्दै जान्छौ । साथै हामी यतिमा नै सीमित हुँदैनौ । आवश्यकता अनुसार शाखा विस्तार गर्दै जान्छौ ।
स्थानीय तहमा बीमाको शाखा पु¥याउने के योजना छ ?
–बीमाको लागि जानु पर्छ भन्ने सोच छ । स्थानीय तहसम्म जान थालिसक्यौ । बीमा भनेको बैंकजस्तो होइन । बीमा गराउनको लागि आवश्यकता प¥यो भने व्यक्ति पनि बीमा कम्पनीसम्म आउन सक्छ । त्यसको लागि काउन्टर र अफिस नै खोलेर बस्नु पर्छ भन्ने होइन । पहुँच कुनाकुनासम्म छ । तर त्यो अनुसारको व्यवसाय भइरहेको छैन् ।
हामीले गर्नुपर्ने काम गरिरहेका छौ । सकारात्मक सोच राखौ । बीमाको महत्व भएर नै ३९ वटा वटा बीमा कम्पनीहरु सञ्चालनमा छन् । बीमा जरुरी छ भनेर बीमा कम्पनीहरु खुलेका हुन् । हामी कसैको ढोकामा ए बीमा गर भनेर गइरहेका छौ । जस्तो कि तपाईको सम्पत्ति रक्षा गर्नु छ म जाने हो र ? तर गइरहेका छौ । यसरी जादाँ पनि भइरहेका छैन ।
बीमा गर्न व्यक्ति स्वयमं बीमा कम्पनी समक्ष आउने हो । बीमा गर्दा त व्यक्ति निर्धक्क हुन्छ । डाक्टर बिरामीको घर घरमा नबोलाइ जान्छ त ?
आखिर बिरामी नै डाक्टरकोमा जाने हो । खोला तिर्खा धाउने कि तिर्खा खोला धाउने हो ? मानिसहरुले नबुझदा समस्या भइरहेको छ । २० वटा ननलाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीहरु छन् । सबैको आ–आफ्नो विशेषता होला । हामी अनलाइन पोलिसी जारी गरिसकेका छौ ।
हामीले अहिलेसम्म स्तरीय सेवा दिदैँ आएका छौँ र भोलिका दिनमा पनि दिन्छौँ । हामी बिना झन्झट सेवा दिन्छौँ । सेवाग्राहीलाई सेवा पु¥याउनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो ।